SIDEE LOO ISTICMAALAA MOLE MASTARADA SHIDAALKA: SIFOOYINKA IYO SHARAXAADDA QALABKA - MISHIINADA GAARKA AH
Xilliga beerku wuxuu bilaabmaa isagoo qodaya qodobka.
Oo aan lahayn miisaanno yubilii ah iyo foornadoy ku filan inay shuqulkani dhammaystirmaan.
Badanaa, ka shaqeynta goobta waxaa la socda xanuunka dhabarka iyo jimicsiga jirka oo aad u badan.
Laakiin maanta, horumarkii ugu dambeeyay waxay yareeyaan hoos u dhigi kara culeyska shaqada iyo in la dedejiyo socodka shaqada. Iyo qalabka ugu muhiimsan ee ninkii beerta oo idil waa inuu leeyahay maadkii Mole. "
Wixii shirkad ah ee dachnik beerta marka laga reebo qalabka khaaska ah waxay u baahan tahay qalab gaar ah: beereed, xayawaan, taraawici, jajab.
Qalabkani wuxuu ka mid yahay dhexdhexaadinta khafiifka ah ee ripper iyo fargeeto.
Marka ugu horeysa, maahan markiiba suurtagal in la go'aamiyo nooca qalabku yahay, mana aha wax sahlan in la qeexo. Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay dib u eegista, waxay caddaynaysaa inaanay waxba ka jirin cutubkan oo la shaqeynaya waa mid fudud.
In wax soo saarka ee majarafadaha waxay isticmaaleen birta adag iyo miisaanka dhismaha waa 4-5 kg. Si kastaba ha ahaatee, tani ma faragalinayso shaqada, maxaa yeelay qalabku uma baahna in la qaado waqti kasta.
Qeybaha waaweyn ee naqshadahan waa:
Joogga iyo joogsiga hore.
Qaybta ugu muhiimsan ee Mole Spade waa ciribtirmo joogto ah. Gacanta ayaa ku xiran tahay, iyo habka backstop ayaa ku xiran dhinacyada. Dhinaca hore waa riwaayado kale oo isku dhejiya qalcadda. Hawlgalkooda ugu muhiimsan waa inay jajabaan bustaha dhulka. Haddii aagga uu yahay dhoobo ama aad u culus ciidda, shaqadani waxay noqotaa mid muhiim ah.
Farsameynta joojinta hore ayaa loo hagaajiyaa ripper, maaddaama uu shaselku noqdo mid deggan oo suurtagal ah, iyo naqshaduna waxay u egtahay maqas.
Badanaa shaqeyntu waxay ku shaqaysaa goobo ballaaran, laakiin waxay ku haboon yihiin shaqooyinka meelaha yaryar.
Ma taqaanaa? Ripper a mashiinka si toos ah loo samayn karaa iyada oo la isticmaalo rodoos, tuubooyinka birta iyo mashiinka alxanka.
Waxaa jira 3 ikhtiyaar oo ah muusikada mucjisada:
nooca "Mole" (qashin qoto dheer);
sida "Plowman" (loogu talagalay dabacsanaanta).
Kala-tashadaan waxay ku xiran tahay faahfaahin dheeraad ah ee naqshadeynta, fursadaha kala duwanna waxay ku kala duwan yihiin qoto dheeraanta dabacsanaanta.
Qaababka Isticmaalida isticmaalka mashiinka dhejiska ah
Makhaayadda beerta "Mole" oo ku salaysan mabda'a qalabka.
Sida loo ururiyo qalab
Ka hor intaadan bilaabin, waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato qalabka:
Ku rakib cirbadaha ganaaxa si ilkaha ilkaha loo dhigo inta u dhexeysa ilkaha.
Ku dhaji qalabka la helayo ee foornada iyo lowska. Suntu waa in si adag loo adkeeyaa si aaney jirin wax khasaare ah.
Ku dheji cutub khaas ah.
Ma taqaanaa? Si aad si qoto dheer uga qoddo gargaarka "Mole", culeyska qofku waa inuu noqdaa ugu yaraan 80 kg.
La shaqee "Mole"
Si toos ah uga sarreeya qaabka waa xoog saar, marka la cadaadiyo kuwaas oo ilkaha majarafadda si siman u galaan ciidda. Marka, marka uu hoos u soo dego gacmihiisa, dhulku wuxuu kiciyaa oo ka jajabiyaa ilkaha aan dhoobada lahayn iyo qaabka. Dhulka carrada sara kiciyey habkan way ka furmeen, cawskana leh xididdadiisa oo kor u kacaya, oo ay ruxaan boodhka carrada. Waxa kaliya oo la ururin karaa.
La shaqeynta majaraha, waa ku filan inaad sameyso dadaal yar. Intaa waxaa dheer, awoodda waa in lagu dabaqo jihada hooseysa. Sidaa daraadeed, xiisadaha ugu hooseeya waxay u dhaqmaan dhabarka hoose waxaynana ku daalaan amar weyn oo ka yar marka la shaqeynayo majarafad la yaqaan. Shoolel-ripper "Mole" ma aha oo kaliya rogida lakabka carrada ilaa kor, laakiin way fureysaa.
Waa muhiim! Habkani wuxuu ku siinayaa inaad ilaaliso bacriminta ciidda.
Iyada oo gacan ka heleysid "mole" waxaad samayn kartaa tallaabooyin badan:
dhulka ku qodo;
dabacsan carrada iyo isla mar ahaantaana ku dartaa oxygen;
diyaarinta ciidda beeritaanka geedo iyo abuurka abuurka;
la dagaallama haramaha.
Faa'iidooyinka isticmaalka majarafad yaab leh
Faa'iidooyinka qalabkan waxaa ka mid ah maaha oo kaliya cabbirka raaxada ee "Mole" majarafad, laakiin sidoo kale sifooyinka soo socda:
geeddi socodka saacad 2-3 sacadood;
hal mar ayaa loo wareejiyaa sariirta 0.5 m ballaaran;
loosen si qoto dheer ah 25 cm;
ka soo saar xididada cawska oo gebi ahaanba, iyada oo aan la jarin;
shaqeeyaan marka si khafiif ah loogu cadaadiyo gacanta.
Intaa waxa dheer, isticmaalka naqshadani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku sii wado caafimaadka iyada oo aan la dhaafin laf dhabarta iyo gacmaha.
Waa muhiim! Dhibaatada kaliya ee "Mole" - Shaqada waxaa lagu fulin karaa oo keliya ciidda qallalan iyo meelaha hore loo daweeyey. Qalabkani wuxuu gebi ahaanba ku haboon yahay ciidda bikrada ah iyo carrada dhagaxa.
Sida aad u aragto, fikradan cusub waxay si weyn u yareeyn kartaa kharashka shaqada waxayna ku dadaaleysaa dadaalka ugu yar marka la samaynayo goobaha waaweyn. Intaa waxaa dheer, marka tilling ciidda waqti isku mid ah, waa la bacrimiya karaa iyo aagga xor ka ah haramaha.